Pamela Wheelock waxaay keenaysa tobanaan sano oo waayo aragnimo ah qaybaha bulshada, gaarka, iyo sadaqada. Ma ahan qof qariib ku ah jagooyinka ku-meel-gaarka ah: Muddadii ugu dambeysay, sanadka 2019 waxay ku dhaqaaqday inay noqoto ku-simaha guddoomiyaha Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota. Shaqaale dowladeed oo heersare ah, waxay sidoo kale ka soo shaqeysay komishanka maaliyadda ee hoos timaada gudoomiye Jesse Ventura, iyo kuxigeenka duqa iyo agaasimaha qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha magaalada Saint Paul.
Laga soo bilaabo 2017 illaa 2019, Wheelock wuxuu u horseeday Labaatan Magaalo Habitat for Humanity inuu yahay sarkaalka ugu sareeya howlgalka. Intaas ka hor, waxay qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin kuxigeenka agaasimaha adeegyada jaamacadda ee Jaamacadda Minnesota, madaxweynaha ku meel gaarka ah iyo madaxa shirkadda Blue Cross Blue Shield ee Minnesota, madaxweyne ku xigeenka Bush Foundation, iyo madaxweyne ku xigeenka fulinta iyo madaxa sarkaalka maaliyadda ee Minnesota Sports & Madadaalo.
Intaa waxaa u dheer, waxay xubin ka noqotay guddiga ururada badan, oo ay kujirto Rochester's Destination Medical Center Corporation, Blue Cross Blue Shield ee Minnesota, Minnesota Wild Foundation, iyo St. Catherine University, halkaasoo iyadu sidoo kale ahayd gudoomiye gudoomiye. Iminka waxay madax ka tahay Minnesota Wild Foundation. Waxay heysataa shahaadada labaad ee cilmiga sayniska ee jaamacadda Marquette iyo bachelor-ka cilmiga farshaxanka taariikhda St Catherine.